गीतकार उमेशचन्द्रको सम्झनामा सार्वजनिक गरियो ‘आजदेखि साथी मैले’(भिडियो सहित) – Saurahaonline.com
गीतकार उमेशचन्द्रको सम्झनामा सार्वजनिक गरियो ‘आजदेखि साथी मैले’(भिडियो सहित)
चितवन, ११ कात्तिक । भौतिक शरीरको निश्चित आयु हुन्छ । तर, सिर्जनाको कुनै आयु हुँदैन, युगौंयुग रहन्छ । स्वर्गीय उमेशचन्द्र घिमिरेको शब्द–सिर्जना रहेको ‘आजदेखि साथी मैले’ बोलको गीतको अडियो र भिडियो काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गरी एकैपटक सार्वजनिक गरिएको छ । गीतमा ख्यातीप्राप्त सङ्गीतकार लक्ष्मण शेषले स्वर दिएका छन् । लामो समयदेखि गीत नगाएका शेषले एक दशकपछि चक्रपाणि तिमल्सिनाले सङ्गीत गरेको गीत गाएका हुन् ।
घिमिरे जीवित छँदा सदैव गीत गुनगुनाइरहने र गीत रेकर्ड गराउने इच्छा रहेता पनि उनको असामयिक निधन भएकाले गीत रेकर्ड हुन सकेको थिएन । ‘उमेश यो गीत बारम्वार गाएर मलाई सुनाउँथे, यो गीत उनलाई निकै मन पर्थ्यो । त्यसैले मैले साथीको चाहना अनुरुप सङ्गीत भरेर उनको गीत रेकर्ड गर्ने जमर्को गरेको हुँ।’ सङ्गीतकार तिमल्सिना बताउँछन् ।
तिमल्सिनाका अनुसार उमेश अन्तर्मुखी स्वभावका थिए । उनी आफूले गरेको रचना कमै व्यक्तिलाई मात्रै सुनाउँथे । स्व. उमेशको गीत बजारमा ल्याएका तिमल्सिनाले असल साथीको भूमिका निभाएका छन्।
गीतको म्युजिक भिडियोमा उमेशकी श्रीमती सुनिता, छोरा र उनै साथी चक्रपाणिलाई देख्न सकिन्छ ।
गीतमा योगेश काजीको सङ्गीत संयोजन र प्रकाश खरेलको मिक्सिङ रहेको छ भने मञ्जुश्री रेकर्डिङ स्टिुडियो पुतलिसडकमा रेकर्ड गरिएको यो गीत नारायण राज आचार्य र अनिल अधिकारीले रेकर्ड गरेका हुन् ।
जीवन भट्टराईको निर्देशनमा निर्माण भएको यस गीतको म्युजिक भिडियोमा छायाँकार मनोज महर्जन, मेकअपमा शम्शेर लामा रहेका छन् भने भिडियोको सम्पादन किशोर खनालले गरेका हुन् ।
उमेशकी श्रीमती सुनिताका अनुसार उनी जीवनका हरेक परिस्थितिलाई शब्दमा अभिव्यक्त गर्न सक्थे । सुनिता सम्झन्छिन्- यो गीत उनले विशेष परिस्थितिमा लेखेका हुन्।‘आजदेखि साथी मैले’ उनले आफ्नो विवाह हुनुपूर्व नै लेखिसेकेका थिए । पछि सुनितालाई पनि सुनाएका थिए ।
कथा, उपन्यासमा पनि कलम चलाउने उमेशका कुनैपनि रचनाहरु कृतिका रुपमा आजसम्म प्रकाशनमा आएका थिएनन् । आगामी दिनमा उनका सबै रचनाहरुलाई संकलन गरेर प्रकाशन गर्ने परिवारको योजना रहेको छ।
सुनिताका अनुसार यो भन्दा निकै सशक्त गीतहरु पनि उमेशको डायरीमा रहेका छन् । यो गीतको प्रतिक्रियाका आधारमा अन्य गीत रेकर्ड गर्ने नगर्ने निर्णयमा पुग्ने परिवारले बताएको छ।
उमेश सुनसान वा एकान्त ठाउँमा मात्र सिर्जना गर्थे । उनलाई हल्ला मन पर्दैन थियो । लेखेका रचना सबैजसो सुनितालाई सुनाउँथे ।
सङ्गीतकार तिमल्सिनाले साथीकै नाताले यो गीत गाउन आग्रह गरेपछि एक दशकपछि गायन क्षेत्रमा पुनरागमन हुन पुगेको बरिष्ठ सङ्गीतकार लक्ष्मण शेष बताउँछन् । उनी प्रष्ट्याउँछन्– ‘गीत पनि साथीको सम्झनामा रहेको र साथीले नै आग्रह गरेकाले पन्छन सकिनँ।’
विगतमा प्लेब्याक सिंगरका रुपमा केही गीत गाएका शेषले यसका अलावा पनि गीतहरु गाएका छन् । शेष भन्छन्– ‘यो गीतबाट गायनमा मेरो पुनरागमन भएको छ ।’ उनी थप्छन्- ‘साथीको साथ छुट्दा हर कोहीको मनमा पीडा हुन्छ, सङ्गीतकार तिमल्सिनाले पनि आफ्नो असल साथी उमेशलाई गुमाए र एक्लो हुँदाको पीडा मनन गरेरै मलाई यो गीत गाउन प्रस्ताव गर्नुभएकोले सहजै स्वीकार गरेको हुँ । सबै मानिसलाई कहीँ न कहीँ यो कथाले छुन्छ । यो गीत तमाम साथी छुटेकाहरुको प्रतिनिधि भाव हो ।’
२०३३ साल बैशाख १४ गते सोमबारका दिन जन्मिएर २०७३ पौष ११ गते स्वर्गारहोण भएका उमेशचन्द्र घिमिरेको यो गीत सङ्गीतकार चक्रपाणि तिमल्सिना र उमेशकी श्रीमती सुनिता खनालको संयुक्त प्रयासमा बजारमा आएको हो ।
यसअघि पनि करिव १६ वटाजति गीतमा सङ्गीत भरिसकेका तिमल्सिनाले साथीको सम्झना स्वरुप ल्याएको यो गीत सरल र मुखैमा झुन्डिने खालको छ ।
उमेश र चक्रपाणिको चिनजान २०६० सालमा भएको थियो । उमेश चक्रपाणिका भान्जा पुष्कर आचार्यका मन मिल्ने साथी थिए । पुष्करले चक्रपाणिका अगाडि उमेशको नाम लिइरहन्थे, धेरै तारिफ गर्थे । भान्जाको कुरा सुन्दा चक्रपाणिलाई कहिले भेटुँ झै भयो । जब पहिलोपटक भेट भयो, चक्रलाई पनि उनी सरल, शिष्ट र शान्त स्वभावको लाग्यो । उनको शालीनताबाट चक्र निक्कै प्रभावित भए । चक्रपाणि भन्छन्- ‘उनी प्रेरणका खानी थिए। पुष्करको असामयिक निधन पश्चात उमेश नै मेरो जीवनका मागदर्शक बने । उनी नेपाल बैंक लि.का प्रबन्धक थिए। पढाइमा अब्बल उनले अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए । मलाई लाग्थ्यो, कस्तो दार्शनिक व्यक्तित्व ! यस्तै बन्न पाए हुने ।
जागीरको सिलसिलामा २०६१ देखि वीरगंज रहँदा हामी दुबै सँगसँगै थियौं । ५ बर्ष म वीरगंज बस्दा उनीसँग सबैभन्दा बढी साङ्गीतिक सामिप्यता रहयो।
घिमिरे सादा जीवन उच्च विचारका मानिस थिए । परिवारमा पनि भरपर्दो छोरा थिए उनी । वीरगंजपछि उनको झापामा जागिर सरुवा हुँदा आमाबुवालाई आफैसँग राखेर बसेका थिए । साधारण लाग्थे तर सहयोगी मनका थिए उनी । म त्यतिबेला जागीरको सिलसिलामा मध्यपश्चिमको नेपालगञ्ज पुगेको थिएँ । रचना गर्न उनलाई पन पर्थ्यो । आफूले लेखेका गीत मसँगको भेटमा सुनाउँथे । मैले सङ्गीत भरेका धेरै गीतहरु पनि उनलाई सुनाउँथें । अत्यन्त मिलनसार थिए उमेश । मलाई उनीजस्तै असल भएको बोध गराइरहन्थे ।
अरुको सेवा गर्दा उनी वास्तवमै खुसी हुन्थे । उदार भावनाका कारण उनी धेरैको मनमा बसेका थिए। मेरो मनमा पनि उनी अमर भएर बसिरहेका छन् । हुन त उनका म भन्दा धेरै अब्बल साथीहरु पनि थिए, धेरैजसो कुशल प्रशासक र कुशल व्यवस्थापक थिए । त्यसैको प्रेरणाले मेरो मनमा कुनैबेला सरकारी अधिकृत बनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै मुख्य सचिव बन्ने सपना पनि पलायो । तर हिंड्दै जाँदा बाटोमा हराएछु कि ! तरपनि त्यस्तै व्यक्तिहरु सँगसँगै कामगर्ने अवसर पाएँ ।
यी सबै उमेशकै प्रेरणाका देन थिए । उमेशले वित्नुभन्दा करिव १ महिना अगाडि मसँग टेलिफोनमा करिव १ घण्टा सम्बाद गरेका थिए । उनले त्यो बेला ‘मेरो गीत कहिले रेकर्ड गर्ने ?’ भनि सोधेका थिए । उनलाई अमर बनाउन मैले यो गीतलाई राम्रो बनाउनु थियो । लक्ष्मण दाइको साथ पाएँ । अब लाग्छ, उनको आत्माले शान्ति पाउने छ ।
उमेश महाप्रसाद खनालका ज्वाईं हुन् । खनालका अनुसार उमेश मानिसलाई छिट्टै विश्वास गर्थे । कसैलाई दुःख परेको छ भने त्यहाँ उनको उपस्थिति हुन्थ्यो । विलासी जीवन उनलाई कहिल्यै मन परेन । सङ्गीत निकै मन पराउथे, तर गाउन लजाउँथे । कहिलेकाहिँ उनलाई सजिलो पार्न ससुरा आफैं गाइदिन्थे । ‘बुवालाई यो गीत आउँछ ? भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । म पनि आउँछ भनेर गाउँथे’ महाप्रसाद सम्झनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ- ‘घिमिरे अन्तरमुखी स्वभावका थिए । कुशल रचनाकार हुँदाहुँदै कुशल प्रशासक पनि थिए ।
उनको मानवीयतालाई मानिसले दुरुपयोग गरिदिए । जुनकुरा भन्नु हुँदैन । व्यक्तिभित्र लुकेको व्यक्तित्वलाई साथी चक्रपाणि तिमल्सिनाले चिन्नुभएको रहेछ । उमेशभित्र रहेको प्रतिभा साथीले नै जीवन्त राख्न बाहिर ल्याउनुभएको छ ।
उनी सहयोगी भावनाका थिए । हरेक दुःखमा उनी मुसुक्क हाँस्थे। ‘यात्रामा दुःख-सुख त आउँदै गर्छ आत्तिनु हुन्न’ भनेर सबैलाई सम्झाउंथे । हाम्रो नजिक दुर्घटना बसिरहेको उनी अन्दाज गर्थे । त्यसको शिकार हुनुपर्छ पनि भन्थे । मानसिक रुपले तयार हुनपर्छ भनेर जीवनका कुरा गर्दै उनी गहिरो चिन्तनमा पर्थे । म उनलाई झस्काउँथे । कुशल प्रशासक हुनुको सत्य अगाडि ल्याइदिन्थेँ । उनी धेरै क्षेत्रमा दख्खल राख्ने मानिस थिए।